တောင်ငူသား: ပီတီယူ + ဆေးကွေး= ?
Posted by Taungoo at 12:46 AM
ကိုတောင်ငူတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ “ပီတီယူ+ဆေးကွေး=??“ တဲ့။ “ပီတီဆေး“ များလား ?၊ ဒါမှမဟုတ် “ပီတိဆေး“ ကွာ၊ အဖြေမထုတ်တတ်ပါဘူး။ ဆပ်ပလီသာ ထိချင်ထိပစေတော့ မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ finite element တပိုဒ်သာ ပြေးတွက်လိုက်ချင်တော့တယ်။
ဒီလောက်လှတဲ့ ကောင်မလေးကို ဘာလို့ ဆေးကျောင်းရောက်တဲ့အထိ အလှကြည့်နေသလဲ။ ငယ်ငယ်က မကြိုးစားဘူးနော်။ အဲဒါတွေ ခက်တယ်ပြောတာ။ အင်ဂျင်နီယာကောင်လေးတွေ အဝေးကကြိုက်နေကြတယ်၊ သူများဆီပါသွားမှ “အဲကောင်မလေးလှတာ သိတယ်၊ ငါ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာ ကြာပြီ“ လုပ်ရော။
ရည်းစာစာပို့နည်းကတော့ ကောင်မလေးက အတော်သဘောကျနိုင်တယ်နော်။ ကျောင်းလိုဂိုလေးကို ဘလော့ဂ်ပေါ်တင်ပါ့လား မမြင်ဖူးလို့။ ဟဲ ဟဲ တော်ကြာသီးသန့်မဖြစ်ဘဲနေပါ့မယ်။
အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားက ဂျီဟောသူကို ဘယ်ရင်ခုန်ပါ့မလဲ၊ လှမှမလှတာ။ ကျောင်းသားအကုန် အားတိုင်း ဆေးကျောင်းကို သွားဝိုက်နေကြတာ သိသား။
ဆရာအပိုင်မရှိတော့ အတော်ကသီတယ်နော် အဲဒီကာလတွေက။ ဆရာမတွေလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း ပင်ပန်းတယ်။
ဒါနဲ့ သီချင်းစာသားလေးလည်း ကြိုက်တယ် “ပီတီယူက သိတယ်“လို့ ခေါင်းစဉ်လေး ပေးလိုက်မလား?
ပို့စ်လည်းဆုံးရော အလွမ်းမင်းသားကြီးပါလား ကိုတောင်ငူရယ် ။ ဒီလောက် စာရေးကောင်းတာ ဘာလို့များ အလွမ်းမင်းသားဖြစ်နေပါလိမ့်??????
သြော် တောင်ငူသားနဲ့ အထင်ကြီးထားတာ ဟီးဟီးးးး
ဟေ့.. တောင်ငူသားလေး တချို့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဒီလိုအရေးအသားမျိုးလေးနဲ့ရေးလေ.. မျှော်နေတယ်
အမလေး.. တောင်ငူကလူတွေက အချစ်ကြီးတာ ရာဇ၀င်ထမ်းပြီး ပြောရမယ်ထင်ပါ့ ကိုတောင်ငူရေ... ကြိုက်မိပြီဆိုရင် အသည်းအသန် ပြီးတော့လည်းမပြောရဲတာနဲ့ အလွမ်းမင်းသားကြီးဖြစ်နေတာ.. အိမ်ကလူလည်း အမသာ မကယ်ရင်.. ဟဲ..ဟဲ.. :D
စာရေးထားတာ ကောင်းတယ် ရီလည်း ရီရတယ်... သီချင်းလည်း လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်သေးတာပဲ... ကိုတောင်ငူဇာတ်လမ်းက အစတုန်းကတော့ romantic ဖြစ်သားလားပဲ..ဖတ်ရင်းက နောက်ဆုံးကျတော့ အလွမ်းဇာတ်ဖြစ်နေတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး လွဲသွားပါတယ် ဆိုသလိုပေါ့ ... နောက်တစ်ယောက်ဆို သိပ်မစဉ်းစားနဲ့တော့နော်.. :D
သွပ်..သွပ်..သွပ်.. နောက်နောင်သင်ခန်းစာကောင်းကောင်းယူတော့ဗျို့ .. ထင်တော့ထင်တယ်.. အပိုင်း (၁) မှာတည်းက ဒီလိုဇာတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာ.. စကားမစပ်..တောင်ငူသူလေးတွေရော အချစ်ကြီးတတ်လားဗျ.. ပန်းနာမည်နဲ့ တောင်ငူသူလေးရော..ဟဲဟဲ
ပီတီယူ - ဆေးကွေး = ?
တောင်ပြာတန်းကသိတယ် ဆိုတဲ့မူရင်းနာမည်နဲ့ နည်းနည်းလိုက်အောင်ရယ် ဆရာ့နာမည်လည်း သီချင်းထဲမှာ ပါနေတဲ့အတွက် ပေးလိုက်တာပါ
လွမ်းရသော တက္ကသိုလ်နေ့ရက်များလည်း စီးရီးလိုက် ရေးဦးမှာပါ
ပြောပြစရာတွေ များလွန်းလို့ ဘယ်ကစရမှန်းမသိဖြစ်နေတာပါ
ကျောင်းလိုဂိုကတော့ တောင်ငူအိမ်မှာ ကျန်ခဲ့လို့ပါ
တောင်ငူသားက သနားစရာလေးပါဗျာ သူ့ခမျာ ပြန်ရှာမတွေ့တာနဲ့
လာပါမယ် မကြာခင် ကျောင်းတုန်းက အဖြစ်ကလေးတွေ အလွမ်းအကြမ်း ဟာသ ပေါက်ကရ အဆောင်နဲ့ ကျောင်းက ဇာတ်လမ်းတွေ မရိုးနိုင်အောင် လာပါတော့မယ်ဗျာ
ဘုရင့်နောင်ရဲ့ သခင်ကြီးကို ချစ်တဲ့အချစ်
နတ်သျှင်နောင်ရဲ့ ဓါတုကလျာကို ချစ်တဲ့အချစ်
အချစ်ကြီးကြတဲ့ တောင်ငူသားအဆက်ဆက်ရဲ့ အချစ်တွေ
အဲဒီထဲမှာမှ ကျွန်တော်သာ မပြောရဲလို့ လွဲခဲ့ရလေသည်
ပန်းနာမည်နဲ့ တောင်ငူသူလေးကတော့ တော်တော်စွာတယ်ဗျို့
ကျွန်တော်ဖုံးဆက်တိုင်း သူကအရင်ကိုင်ပြီး ဂျီကျတာလည်း စုံနေတာပဲ
အားယိုး အုံးပုံးအချစ်က အလုပ်မဖြစ်ပါလားနော်။ မှတ်သားစရာပဲ။ တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေရင် တသသဝေးသွားလိုက်မယ် ကို တောင်ငူသားရေ.... :P
အော်.. အဲဒီလောက်တောင် ချစ်သတဲ့လား။ တကယ်တမ်းကျတော့ အနေနီးတာ ဝေးတာထက် ဖူးစာရှင် မမှန်လို့ သူကလေး ရင်မခုန်တာ ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း မျှော်နေမယ်..:)
2001 က Miss glory ဘယ်သူများပါလိမ့်နော်.. ခွိခွိ :P